Yemagariro Midhiya Kukura Statistics Kupfuura 2015 | Martech Zone
Tsvaga Injini Zvinyorwa yakagadzira yechitatu yegore vhezheni yeiyo infographic pane iyo kuenderera mberi kukura kwesocial media, ichipa huwandu hwese pasocial network kuburikidza na2015. Iyo inovhura neiyi quote kubva kuna Gary Vaynerchuk.
Pandinonzwa vanhu vachikakavadzana neIO yemasocial media? Zvinoita kuti ndirangarire kuti nei bhizinesi rakawandisa richikundikana. Mazhinji mabhizinesi haasi kutamba marathon. Vari kutamba Sprint. Ivo havana kunetseka nezve kukosha kwehupenyu uye chengetedzo. Vari kunetsekana nezve zvinangwa zvenguva pfupi. Gary Vaynerchuk
Ndiri fan waGary V, asi ini handitende kuti chitaurwa chakarurama, uye hachikwani pamusoro. Ini ndinoziva wekutanga ruoko kudenha kwevese vanoshanda bhizinesi uye kutaurirana kuburikidza nesocial media. Ndiri kunetsekana nezve kukosha kwehupenyu hwevatengi vedu uye kuchengetwa kwavo. Isu hatitungamirire yedu yemagariro midhiya kuvapo zvakakwana, uye isu tiri nyowani midhiya kambani!
Ini handisati ndapinda mubhizinesi zvakadaro apo vashandi vaive vakamira vakatenderera vasina chavanoita panzvimbo yekuita zvakadzama online netarisiro nevatengi. Sezvo isu tichishanda pamwe nevatengi uye tichivapa iwo mhinduro pakuvandudza mashandisiro avo enhau enhau, tinoona matambudziko avanotangisa-ruoko.
Mabhizinesi mazhinji haana hunyanzvi hwe bhizimisi mune maturusi uye vashandi vanokwanisa kushandisa yavo yemagariro midhiya. Matipi sekukwiridzira magadziriso eruzhinji anoenderana nechiteshi uye kuita zuva rese kana kungosvikika.
Mabhizinesi ari kupikiswa pamwe nekudzikira kwemahara mibairo uye kuwedzera kukwikwidza muindasitiri yavo. Izvo hazvisi kuitika nekuti ivo havasi kugadzirisa avo Facebook zvinyorwa. Zano renguva refu harina basa zvakanyanya kana iwe uchida kutungamira izvozvi kuti uchengetedze mwenje.
Mabhizinesi ari inoshayiwa ari zano uye kudzidziswa zviwanikwa zvekudzidzisa vashandi vavo pakuita rakabudirira rezvenhau zano. Tiri kugadzira izvo zvirongwa, asi havazi vese vanogona kuwana kudyara. Ini ndinobvumirana naGary V izvo kwete kuisa mari inogona kuperetera kuparadzwa kwekambani kwenguva refu uye kuti iyo investa ichabhadhara. Asi mabhizinesi mazhinji nevashandi vavo vari pakati nepakati izvozvi.
Makambani achangoburwa anowanzo kukohwa mabhenefiti enhau enhau. Yakanga yakadzika sechikamu cheDNA yavo kubva pazuva ravakatangisa bhizinesi ravo. Muchokwadi, bhizinesi ravo rinogona kunge rakatoputika online nekuti ivo vaive vekutanga kutora. Iwo haasi iwo mazhinji emabhizinesi, zvakadaro. Mazhinji makambani mafemu enhaka aive nekubudirira kutengesa uye nzira dzekushambadzira dzaive munzvimbo kwemakumi emakore - uye vezvenhau vezvenhau vaisave chikamu chemusanganiswa.
Ini ndinoda kutaura kune echinyakare, enhaka mabhizinesi. Muchokwadi, ini ndangoita a hurukuro yakakosha nevatungamiriri vebhizinesi kubva kumakambani emari uye emagetsi. Ini handina kuvashora nekuda kwekufunga kwenguva pfupi - havasi ivo. Zvandakaita, pachinzvimbo, kwaive nekutendeseka nhaurirano pamusoro pevatengi uye bhizinesi mutengi maitiro ayo anoda kuti vagadzirise.
Imwe nzira yekufunga nezvemagariro enhau ndeyekuienzanisa nekutengesa kwechinyakare uye kushambadzira. Kana paine musangano weindasitiri uko tarisiro yako inofashukira, bhizinesi rako raizoisa mari mudumba uye ndokutumira rako rakasimba timu kuchiitiko Boka rako rekushambadzira raizove rakaoma pabasa kupa chibvumirano chakakosha uye kushambadza chiteshi chako kukwezva vanopfuura.
Pachiitiko icho, rako rekutengesa timu raizoita hurukuro dzine musoro nevatengi uye tarisiro. Ivo vaizobata mibvunzo yekutanga kubva kune vanoda kuziva vaipinda. Ivo vaizonamatira zvakanyanya kuti vawedzere nguva yavo uye vasvike pachiitiko. Uye ivo vangakoka vangangove tarisiro kune-yakadzama hurukuro pamusoro pezvinwiwa uye nemanheru.
Kunyangwe iri mhando yechiitiko, zviri kusahadzika wako wekutengesa nyanzvi angangomira ipapo akamirira kuti mumwe munhu avabvunze mubvunzo, kana kusvetuka kunze kune imwe neimwe tarisiro yekudzokorora kupihwa kakawanda. Iwo iwo iwo mikana iripo mumasocial media. Asi vezvenhau venhau vanopa musangano wepasirese indasitiri gore rese, uchimhanya awa rega rezuva rega rega.
Pakati pemabhiriyoni matatu evashandisi vepasirese pasirese, 3 bhiriyoni vane nhoroondo yemagariro enhau nevane 2.1 bhiriyoni vanoshandisa
Vatengi vako varipo. Yako tarisiro iriko. Tsvagiridzo yavari kutsvaga vese iripo. Uye vakwikwidzi vako varipo. Rinenge rwese rwendo rwevatengi runosanganisira vezvenhau, kubva pakuziva kuburikidza nekutendeuka, mazuva ano. Kuziva icho chinhu chakakosha kumabhizimusi kuisa mari mukuwedzera kwevezvenhau kuvapo, kuchinjika kumatambudziko ayo kunounza uye kutora nzira dzinowedzera mhedzisiro yebhizinesi.
Hezvino tarisiro yekuenderera mberi kwekukura kwenzanga midhiya, pasirese, kuburikidza na2015:
Tags: gary vgary vaynerchukgary veeevanhu vezvenhausocial media statistics
Izvo zvinangwa zveAation zvishandiso uye Kushambadzira Kuedza
Adobe Portfolio: Gadzira uye Gadzira Yako Online Portfolio